Jasiiradaha Canary 'waa ammaan' ayuu yiri wasiir iyadoo 5,000 oo qof ay ka carareen qarxinta La Palma
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Spain » Jasiiradaha Canary 'waa ammaan' ayuu yiri wasiir iyadoo 5,000 oo qof ay ka carareen qarxinta La Palma
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Spain • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Wasiirka arrimaha dalxiiska ee Spain Reyes Maroto ayaa yiri: “Ma jiraan wax xayiraad ah oo ku aadan tagitaanka jasiiradda…
Faahfaahinta Folkaanaha La Palma ayaa burburisay ugu yaraan 20 guri waxayna ku qasabtay in ay daad gureeyaan 5,000 oo qof.
Illaa iyo hadda, mas'uuliyiintu waxay ku guuleysteen inay ka daad gureeyaan ku dhawaad ​​5,000 oo qof tuulooyin dhowr ah oo ku yaal El Paso iyo Los Llanos de Aridane.
Sida laga soo xigtay Wasiirka Dalxiiska Isbaanishka Reyes Maroto, Jasiiradaha Canary waa ammaan in la booqdo waxaana qarxa volcano ka dhacay “bandhig cajiib ah”.
Qulqulka Folkaanaha ee Jasiiradda La Palme ee Jasiiradaha Canary ayaa burburiyey ugu yaraan 100 guri wuxuuna ku qasbay daadgureynta 5,000 oo qof, iyada oo boqolaal kale ay halis ugu jiraan qulqulka lafaha oo sii kordhaya, kaas oo sidoo kale la filayo inuu kiciyo gaasas sun ah marka uu gaaro badda .
Duqa magaalada El Paso, La Palma, Sergio Rodriguez Fernandez ayaa ka digay in tuulada ku dhow ee Los Llanos de Aridane ay halis ku jirto, iyadoo saraakiishu “ay la socdaan halka ay marayso lafaha” ka dib markii uu qarxay volcano galabnimadii Axadda.
Muuqaalo la duubay ka dib markii ay qarxeen ayaa muujinayay lava oo boqolaal mitir hawada ku duulaysa, una dirtay jajabkii fulkaanaha Badweynta Atlantikada iyo dhinaca gobollada ay dadku ku badan yihiin ee La Palma, oo qayb ka ah Jasiiradaha Canary ee Isbaanishka.
Saraakiisha ayaa ku guulaystay inay ka daad gureeyaan ku dhawaad ​​5,000 oo qof tuulooyin dhowr ah oo ku yaal El Paso iyo Los Llanos de Aridane. Inkasta oo lafaha weli sii fidayo, ayaan hadda la qorsheyn daad -gureyn. Lama soo sheegin wax dhaawac ah ama dhimasho ah, iyadoo Nemesio Perez oo ah khabiir ku takhasusay fulkaanaha uu sheegay inaan midna la filayn, marba haddii dadku si macquul ah u dhaqmaan.
Qiyaastii 360 dalxiisayaal ah ayaa laga daadgureeyay goob loo dalxiis tago oo ku taal La Palma kadib markii uu qarxay waxaana la geeyay jasiiradda u dhow Tenerife doonni Isniintii, afhayeen u hadlay hawlwadeennada doonta ayaa yiri Fred Olsen.
180 kale oo dalxiisayaal ah ayaa laga daadgureyn karaa La Palma galinka dambe ee maalinta, afhayeenka ayaa intaas ku daray.